पीसीआर परीक्षणः अब कस–कसलाई जाँच्ने ? कतिलाई जाँच्ने ? | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
access_time२०७७ साल श्रावण २७ गते, मंगलवार ०६:५६ AM chat_bubble_outline Comments folder_open प्रदेश पत्रपत्रिका
काठमाडौं । असार १९ गते ४ हजार ४ सय ८३ जनाको पीसीआर परीक्षण गरियो । ७ सय ४० जनामा संक्रमण पाइयो । यो १६.५ प्रतिशत हो । जब कि साउन १९ गते १० हजार ७ सय ६८ जनाको जाँच गरियो । यसमा २.१ प्रतिशत अर्थात् २ सय २४ जनामा कोरोना पोजेटिभ आयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू अचेल यी दुई रिपोर्टलाई अघि राखेर पीसीआर परीक्षण रणनीति बनाउन खोज्छन् । अन्योलमा पर्छन् । कारण– थोरैलाई जाँच्दा धेरै संक्रमित भेटिन्छन्, धेरैलाई जाँच्दा थोरै । र, आफू–आफूमा सोध्छन्, अब कस–कसलाई जाँच्ने ? कतिलाई जाँच्ने ?
पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन सरकारलाई दबाब छ । ‘धेरैलाई जाँच्दैमा संक्रमित भेटिने होइन रहेछ’, उक्त परिणामलाई उदाहरण दिँदै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्छन्, ‘कसलाई जाँच्नु अत्यावश्यक छ भन्ने पहिचान पहिला गर्नुपर्ने रहेछ ।’
त्यो पहिचान गर्न पनि त्यति सजिलो छैन । अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट भएका परीक्षण सम्भावितकै हो । तर, परिणाम तल–माथि पर्ने गरेको छ । ‘पोजेटिभ रिपोर्ट २ प्रतिशभन्दा कममा आयो भने परीक्षणको खर्च खेर गएको मान्नुपर्ने हुन्छ’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्यविज्ञ डा सुरेश तिवारी यसबारे प्रस्ट पार्छन्, ‘१० प्रतिशभन्दा माथि गयो भने व्यापकता दिनुपर्ने ठान्नुपर्छ । त्यसैले परीक्षणमा अति जोखिमकालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
प्राथमिकता कसलाई दिने त ? जनस्वास्थ्यविद् प्राडा शरद वन्त क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको परीक्षण गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । परीक्षण कसलाई गरिरहेका छौं भन्नेले अर्थ राख्छ । बढी जोखिममा रहेकालाई परीक्षण गरिरहेका छौं कि, कसलाई गरिरहेका छौं ? उनी प्रश्न गर्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, हाल पीसीआर परीक्षण प्रतिदस लाखमा १५ हजार ४ सय ९३ जनामा भइरहेको छ । २३ हजार ३ सय १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्वारेन्टाइनमा भित्र र बाहिर रहेका व्यक्तिलाई परीक्षण गरिरहेको जनाएको छ ।
बाहिरका व्यक्तिलाई परीक्षण गराउँदा राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको हुन सक्ने शंका विज्ञहरूको छ । परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ भनेको घरघरमा गएर परीक्षण गर्नु भनेको होइन । उच्च जोखिममा रहेका व्यक्ति छुट्नु हुँदैन भन्ने हो’, डा वन्तले भने, ‘पछिल्लो समय संक्रमण वृद्धि भइरहँदा पहुँचवाला र जोखिम बाहिरका व्यक्तिको पनि परीक्षण गरेको पाइएको छ ।’
सरकारले हालसम्म ४ लाख ५२ हजार २ सय ३६ पीसीआर परीक्षण गरेको छ । तीमध्ये २३ हजार ३ सय १० जनाको कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।
बहुबलीको नामले परिचित काभ्रेको तीनधारे झरना हेर्नेको भीड
गौतम सांसद बने, मन्त्री अनिश्चित
चीनसँग नेपालका प्रमुख व्यापारिक नाका ठप्प